VALERY Rashkin: जीवनी र राजनीतिक गतिविधि
VALERY Rashkin को कलिनिन्ग्राद क्षेत्रमा भौगोलिक पर्छ जो सानो Zilina को, गाउँमा मार्च 14, 1955 जन्म भएको थियो। को मास्को शहर समितिको सचिवालय को काम को लागि चारैतिर फैलियो, राज्य Duma गर्न निर्वाचित रूसी कम्युनिस्टों केन्द्रीय समिति को Presidium सदस्य छ।
VALERY आमाबाबु, समय धेरै ग्रामीण परिवार जस्तै, छोराछोरी धेरै थियो। बाल्यकाल, केटा, सँगै आफ्नो भाइबहिनीहरूसित मेहनत गरे पछि, पैसा कमाउन आफ्नो बाबु र आमा मदत गरे। भविष्यमा कम्युनिस्ट मा बच्चा लगभग थिएन भन्ने तथ्यलाई बावजुद, उहाँले धेरै न्यानो आफ्नो जीवनको यो अवधि थियो। आफ्नो जीवन मा सबै भन्दा राम्रो परिणाम हासिल गर्न कुनै तरिका - उहाँले यो एक बच्चा परिवार एक सामूहिक काम र महत्त्व बुझ्न छ भनेर भन्छन्।
VALERY Rashkin साराटोभ मा पलिटेक्निक संस्थान अध्ययन गर्न गए र सफलतापूर्वक इलेक्ट्रनिक ईन्जिनियरिङ् र इन्सट्रूमेंटेशन को संकाय स्नातक। त्यसपछि उहाँले धेरै 17 को रूपमा वर्ष काम गर्न बाँकी जहाँ कम्पनी, "आवास", मा काम गर्न पठाइएको थियो। आफ्नो समयमा Rashkin मुख्य विधानसभा बोट को मुख्य गर्न एक सरल इन्जिनियर देखि गएको छ। टोलीमा तेजी पदोन्नति गर्न योगदान जो आफ्नो ठोस चरित्र, सराहना।
VALERY Rashkin: कम्युनिस्ट पार्टी। राजनीतिक गतिविधिहरु को शुरुवात
पनि त Rashkin पार्टी समिति को सचिव भए र पार्टी सबै समय छोड्न भएन। तिनीहरूले उसलाई नब्बे मा कम्युनिस्टों सोभियत संघ को कुनै पनि पतन, न त विश्वव्यापी निन्दा तर्साउन छैन। Rashkin Valery Fedorovich खेल मा सक्रिय, पर्वतारोहण मा एक मालिक डिग्री प्राप्त। उहाँले धेरै खेल पुरस्कार मालिक हो। उहाँले आर्थिक विज्ञान को एक डाक्टर भयो।
नीति सन्दर्भमा प्रारम्भिक नब्बे को दशक मा Rashkin जनता प्रतिनिधि को साराटोभ सोभियत को एक सदस्य थियो। 1993 देखि उहाँले साराटोभ क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष को स्थिति कल्पित। एक वर्ष पछि साराटोभ क्षेत्रीय Duma सदस्य भए। VALERY Rashkin, दृढ पनि ideological स्थितिहरु मा खडा, उल्लेख Gennady Zyuganov उहाँलाई आफ्नो बनाउनुभएको (कम्युनिष्ट पार्टी नेता), confidant। सम्म 1999 Rakshin रूपमा काम उप गर्न सहायक राज्य Duma को। र डिसेम्बर 1999 मा, र उहाँले गए को राज्य Duma को संरचना को साराटोभ क्षेत्र को तेश्रो दीक्षांत समारोह।
उहाँले मतदाता bribing उहाँलाई दोष लगाउँदै, इन्कार - 2000 मा उहाँले राज्यपाल लागि चलाउन क्षेत्र नेतृत्व गर्न प्रयास गर्नुभयो, तर दर्ता गर्न असमर्थ थियो। पार्टी अन्याय प्रतियोगिता को क्षेत्र मा राज्यपाल गरेको दौड को अन्य सहभागीहरू द्वारा आयोजित भएको एक वक्तव्य जारी।
तीन वर्ष पछि, फेरि एक उप Valery Rashkin भयो। कम्युनिस्ट पार्टी वोट को एक सभ्य राशि जित्यो र Rashkin कम्युनिस्ट पार्टी को केन्द्रीय समिति को Presidium नियुक्त गरियो। Rashkin Valery Fedorovich र पछि बारम्बार राज्य Duma को उप निर्वाचित भएको थियो। त्यहाँ पनि आज उसलाई काम जारी छ।
VALERY Rashkin: जीवनी भ्रष्टाचार
Rashkin इन्टरनेटमा आफ्नो ब्लग नेतृत्व र प्रविष्टिहरू को एक राज्य Duma मा घोटाले को कारण थियो। यो अवैतनिक को प्रतिनिधि बीच भयो जो, सुटिङ मा प्रतियोगिताको थियो। Rashkin उहाँले पुटिन एक लक्ष्य रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर लेखे। केही समय पछि, राजनीतिज्ञ उहाँले फोटो, रूसी संघ को छैन राष्ट्रपति बताइरहेका थिए कि थपियो।
पत्रकार त्यो भन्न चाहेको, एक कम्युनिस्ट आग्रह गर्दा उहाँले joked र भन्नुभयो, "एउटा ब्लग प्रविष्टि कुनै अर्थ छैन।" र राष्ट्रपति पुटिन बारेमा रिपोर्टअनुसार छलफल। VALERY Rashkin भन्ने हाम्रो देशमा त्यस नामको मान्छे धेरै, पनि त्यो छ एक मित्र पुटिन, छैन राष्ट्रपति बताए। तथापि, भूल छैन त सजिलो कहानी।
राज्य Duma को sidelines अझै पनि त्यो प्रतियोगिताको र मजाक Rashkin धेरै महिना सम्झना। Rashkin सधैं नकारात्मक पुटिन गरेको पक्ष मा व्यक्त र उसलाई भनिन्छ कि गरम वातावरण "कुलीन वर्गहरु को एक प्रतिनिधि," र उहाँले कम्युनिस्ट स्थितिहरु मा उभिए।
को सांसद पनि क्रिमीआ को annexation संग अवस्था देखि aloof बाँकी छैन। Rashkin अनुसार, कम्युनिस्टों यो गर्न पुटिन बाध्य। अन्यथा, एक कदम जस्तै को अध्यक्ष छैन हल गर्न सकिएन। साथै, Rashkin अक्सर अपराधीहरूलाई को एक निश्चित "parkovskoy समूह" सँग सम्बन्धित छ। मिडिया बल्लतल्ल Rashkin जस्तै (Criminale, कानून उल्लङ्घन, अनैतिक कामहरू) केहि आरोप भनेर लेखे, त्यो संसदीय जाँचको सबै सम्भव उदाहरणहरू फेंकता मन्दिर वा वित्त orphanages गर्न दानको पूरा, उपकारक सिमुलेट। क्षणमा उहाँले आपराधिक संगठन हो कि जानकारी, यो एक अफवाह रहन्छ र आधिकारिक पुष्टि।
व्यक्तिगत एक बिट
हाल उनको पत्नी पेशा द्वारा एक मनोवैज्ञानिक छ, उप विवाह छ। Rashkin लामो देखि हुर्केका र आफ्नै को परिवार सुरु गरेकी दुई छोरा, उठायो। सोख लागि जाँदा, Rashkin जस्तै चढाई। उहाँले एकसाथ एउटै चासो साथी को एक समूह संग, काकेशस धेरै चुचुराहरूको भ्रमण गर्नुभएको थियो।
माथिल्लो लार्स: जोखिम क्षेत्र
Abdulla Odzhalan: जीवनी
लियो Schlossberg: जीवनी, काम
चीन: सरकारको फारम। चीन मा सरकार को फारम
वोरोनिश अथवा कसरी निकल Detonator 'सुन्तला' बम क्षेत्र रूस मार्फत झटका गर्न
यो छ कि छैन भनेर ऋण अघि पट्टे फाइदा
को तल ज्याकेट के, तल चढती? किन तल जैकेट को fluff चढ्नु?
डेबिट कार्ड "टिंक ओफ ब्ल्याक": मालिकहरूको समीक्षा। शर्तहरू, शुल्कहरू
को काम घण्टा के के हुन्?
छिटो र स्वादिष्ट - साथ पकौडी सूप
कसरी विन्डोज 10 मा BIOS प्रविष्ट गर्न: निर्देश
निगालो - बिरुवाहरु को हेरविचार, यो के हो?
दही र दूध संग जायफल